အရောငျရငျ့မှတျတမျး – Bold News May 2019 မေ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အရောငျရငျ့မှတျတမျး – Bold News May 2019 မေ ၂၀၁၉
အရောငျရငျ့မှတျတမျး – Bold News May 2019 မေ ၂၀၁၉
U.S. ပြည်နယ်က မြို့အသီးသီးများမှာကျင်းပတဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်ပ ွဲသတင်းများ။
မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ သင်္ကြန်သံချပ်စုကြစို့ ဆောင်းပါး။
ညီပုလေးရဲ့ စစ်ကိုင်းစံပယ် ဆောင်းပါး။
LA နဲ့ San Francisco မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ စိုးသူ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပ ွဲသတင်းဓာတ်ပုံများ။
မေလ အလှပန်း May Jewel Linn ။
မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘ ွဲ့။) ရဲ့ ဆူဒိုဂေါက်အဆစ်ယောင်ရောဂါ ဆေးပညာဆောင်းပါး။
တိမ်မည်းရဲု့ ဆေးလျှော်နှင့် ဆေးခြောက်ခြားနားချက်။
မောင်မိုးညိုရဲ့ အ မေရိကပြည်တဝှမ်း ၂၀၂ဝ သန်းခေါင်စာရင်းအကြိုအခင်းအကျင်းနဲ့ One Burmese ဆောင်းပါး။
လစဉ်ဖော်ပြ နေကျ ဆရာမျိုးကျော်မြင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး၊ ကာတ ွန်း၊ ကဗျာ၊ ဗေဒင်၊ သုတ၊ ရသ စုံလင်စ ွာဖြင့် မြန်မာ့ဂဇက် မေ လ ၂၀၁၉ ထ ွက်ပါပြီ။ မြန်မာဆိုင်များမှာ အခမဲ့ ရယူပါ။
၁၉၉ဝ ‌လောကျကထဲက.. Sperm ‌တှလှေူနတောကနေ.. စာရငျးခြုပျတော့.. (‌လော‌လောဆယျမှာကို) သား/သမီး ၂၀‌ကြောျ ရဲ့အဖရေငျးဖွဈနေ..
အဲဒါ စံခြိနျတော့မဟုတျသေး ပါဘူး..
သတငျးအရ..သုတျပိုးလှူပွီ‌မှေးထားကွတဲ့.. သားသမီး ၂၀ဝရဲ့.. အဖရေငျးအမရေိကနျတဦး ရှိပါ‌သေးသတဲ့..။
အရငျဖတျဖူးတဲ့သတငျး‌တှထေဲမှာပဲ.. ကလေးလိုခငြျတဲ့.. စုံတှဲက.. တက်ကသိုလျကြောငျးသားလူငယျတဦးနဲ့.. စတားဘတျကောျဖီဆိုငျမှာ.. ခြိနျး..။ ‌ကနြျးမာ‌ရေးစဈခကြျ..ဘာညာ‌တှပွေ..။ ကြောငျးသားက..အိမျသာထဲဝငျ.. သူ့သုတျပိုးကို ဖနျပွှနျလေးထဲထညျ့ပွီး.. ‌ဒေါျလာ ၅၀ဝနဲ့ရောငျး..။ ဆိုငျရာလကျမှတျထိုး..။ အမလေုပျမယျ့သူက.. အိမျသာထဲပွနျဝငျ..။ ပွနျထှကျ.. နဲ့. ကိစ်စပွီး..ကိုယျ့လမျးကိုယျသှားကွ..
အဲလိုနဲ့ ပွီးသှားတဲ့.. အရောငျးအဝယျ ဘဈဇနကျ..မြိုးလဲရှိ..။
လူက ‌ခွေ၂‌ခြောငျး‌ပေါျျမတျတတျရပျရတဲ့.. အီဗေါျျလူရှငျးကို ခနျ့မှနျးသိသှားပွီ….တဲ့..